Njani Ukufumana Acquainted kwi-Intanethi kunye A Guy Usapho kwaye budlelwane nabanye
Ngaphambili, uninzi ngokufanayo zephondo ka-dating baba busuku uncwadi, intlanganiso ngokusebenzisa abahlobo, ngexesha langoku, zininzi iindlela dating wethu progressive society. Ezona ethandwa kakhulu ngala acquaintances ngokusebenzisa intlalo networks kwaye ngezixhobo ezahlukeneyo dating zephondo. Ngokuchanekileyo zalisa ulwazi malunga ngokwakho. Eli candelo ayikho ingakumbi afanelekileyo jokes, ukuba ufuna ngokwenene ingaba ezinzima ukufumana acquainted kunye guy. Zama isolate ngokwabo kangangoko kunokwenzeka. Yithi rhoqo ndiyabuvelela park, qiniseka ukuba umzekelo-icatshulwe kuyo. Kwixesha elizayo, uza kukwazi mema a guy kuba kuhamba kunye. Musa zalisa kwi-iphepha lemibuzo malunga inkangeleko kunye inkcazelo engakumbi. Kukholelwa kum, kukho ngakumbi umdla iincwadi kunokuba yakho biography.
Njengokuba umthetho, kwi dating zephondo kunye namaqonga networks ezininzi profiles ngaphandle iifoto. Abazange bonwabele impumelelo. Kwi kakhulu ngakumbi glplanet ukuba zithungelana kunye umntu kwi umsebenzi womnatha ekubeni ubuncinane abanye unye malunga interlocutor. Nangona kunjalo, wonke album ayikho kunabela. Yakho umchasi babe bacinga ukuba uhlala ngqo kwi-onesiphumo ihlabathi. Ideally ngayo elicetyiswayo abeke – iifoto. Kumele yakho eyona imifanekiso ukuba uza sixelele kancinane malunga nawe. Zama zithungelana respectfully kwaye tactfully. Musa qala dialogue kunye a stranger kuwe umntu kunye mazwi: ‘Molo.
Njani ngabo kuwe
Kubalulekile engathndwayo ukuba esezantsi indlela iya inzala i-interlocutor. Kanjalo, musa kuba efuna ingqwalasela ka-husky ke, iifoto, izipho okanye ezahluka-hlukileyo winks. Ukuba ihlawulwe izipho yenzelwe exclusively to enrich abenzi be zephondo, ngoko ke winks kwaye [iinketho] ukumela into ka ingqwalasela. Lweentshukumo zabo, endleleni, kubaluleke kakhulu exaggerated. Musa qala unxibelelwano kunye izincomo. Ukususela yakho interlocutor iindumiso ndivuma zinokuphathwa okanye yingqele. Ukongeza, uyakwazi xa kuqaliswayo kuphulukana nayo ukukholosa. Ngenyameko kovavanyo yonke imifanekiso kwaye ukufunda ulwazi kuwe liked umntu. Zama ukufumana ngokufanayo umdla. Ngolo indlela iya engender a favorable dialogue kwaye uza kumisela elide incoko. Buza imibuzo lomnye umntu. Ngoko ke, uza thatha involve i-umchasi kwi-incoko. Iimpendulo nika a ngakumbi oluneenkcukacha, musa thatha ixesha lakho. Imibuzo zama ukuba ubeke ngoko ke, ukuze babe musa kufumana cacisa iimpendulo ‘ewe’ okanye ‘hayi. ‘Landela Russian isijamani. Musa bother ukuba bathethe. Wonk ubani kwezabo imicimbi. Musa ukubhala umntu wonke ngomzuzu. Kungcono ukuba bathethe kanye ngosuku, kodwa qualitatively. Endleleni, ixesha kuba uthetha ngu-kunokwenzeka ukuba phambi-bayathetha kunye umntu. Zama ezi imizuzu ukuba babelane wabo kwaye izehlo ukuba yenzekile ngexesha imihla. Kubalulekile kakhulu ngakumbi umdla kunokuba nje yokufumana phandle ukuba ngubani, yintoni ngoku kwi-sebenzisa kwaye zokusombulula.
Musa postpone ntlanganiso
Onesiphumo unxibelelwano banokuthatha kweenyanga eziliqela. Kodwa kakhulu ukuba insist kwi intlanganiso hayi kuyimfuneko. I-proposal kufuneka unobtrusive. Umzekelo, uyakwazi kunikela ukuya cinema kuba ngumhla iseshoni okanye ukuhamba kwi-park. Xa uqinisekile ukuba lenkqubo icinyiwe phantsi, yokucinga ngayo, usenokuba ufuna ukutshintsha incoko. I-Internet kukuba ezininzi ebizwa-onesiphumo guys ukuba, kwi-siseko, akunjalo, omiselweyo ukuze aphile unxibelelwano
← Tips for Dating Isitshayina Abafazi Dating Iincam